Izindaba - Umhlaba weNokia Bell Labs uqopha izinto ezintsha ku-fiber optics ukunika amandla amandla aphakeme nangaphezulu ezinethiwekhi ze-5G zesikhathi esizayo
Sishayele: + 86-13682786242
I-SFP + Duplex
Uchungechunge lwe-155M ~ 6G
Ithusi SFP RJ45
Umhlaba weNokia Bell Labs uqopha okusha ku-fiber optics ukunika amandla amandla asheshayo nangaphezulu amanethiwekhi we-5G wesikhathi esizayo
Muva nje, abakwaNokia Bell Labs bamemezele ukuthi abacwaningi babo babeka irekhodi lomhlaba lezinga eliphakeme kakhulu lokuthwala oyedwa kunfibre ejwayelekile yemodi eyodwa yamakhilomitha angama-80, enesilinganiselo esingu-1.52 Tbit / s, okulingana nokudlulisa i-YouTube eyisigidi esingu-1.5 amavidiyo ngasikhathi sinye. Iphindwe kane ubuchwepheshe be-400G obukhona manje. Leli rekhodi lomhlaba nokunye ubuchwepheshe benethiwekhi ye-optical kuzothuthukisa ikhono leNokia lokwakha amanethiwekhi we-5G ukuhlangabezana nedatha, umthamo, nezidingo zokubambezeleka kwe-Intanethi yezimboni Yezinto nokusetshenziswa kwabathengi.
UMarcus Weldon, oyiChief Technology Officer yakwaNokia noMongameli weNokia Bell Labs, uthe: “Kusukela kwasungulwa izintambo ezilahleka kancane kanye neminye imishini ehlobene nayo eminyakeni engama-50 edlule. Kusuka ohlelweni lokuqala lwe-45Mbit / s kuya kusistimu yanamuhla ye-1Tbit / s, Ikhuphuke ngaphezu kwezikhathi ezingama-20,000 eminyakeni engama-40 futhi yakha isisekelo salokho esikwaziyo njenge-Intanethi kanye nomphakathi wedijithali. Indima yeNokia Bell Labs ibilokhu iphikisana nemikhawulo futhi ichaza kabusha imingcele engaba khona. Umlando wethu wakamuva ocwaningweni olubonakalayo ufakazela futhi ukuthi Sakha amanethiwekhi asheshayo futhi anamandla ukubeka isisekelo senguquko elandelayo yezimboni. ”Iqembu leNokia Bell Labs Optical Network Research Group eliholwa nguFred Buchali lenze isilinganiso esisodwa senkampani yenethiwekhi esingafika ku 1.52Tbit / s. Leli rekhodi lisungulwa ngokusebenzisa i-128Gigasample / yesiguquli esisha sha ekwazi ukukhiqiza amasiginali ngesilinganiso sophawu lwe-128Gbaud, kanti isilinganiso semininingwane yophawu olulodwa sidlula ama-bits ayi-6.0 / uphawu / ukuhlukaniswa. Le mpumelelo yephule irekhodi le-1.3Tbit / s elenziwe iqembu ngoSepthemba 2019.
Umcwaningi weNokia Bell Labs uDi Che nethimba lakhe baphinde basetha irekhodi elisha lesilinganiso sedatha emhlabeni lama-DML lasers. Ama-lasers we-DML abalulekile ekusetshenzisweni okungabizi kakhulu, okushesha kakhulu njengokuxhumeka kwesikhungo sedatha. Ithimba le-DML lithole isilinganiso sokudluliswa kwedatha esingaphezu kwama-400 Gbit / s ngaphezulu kwesixhumanisi se-15-km, okubeka irekhodi lomhlaba. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi bakwaNokia Bell
Amalebhu muva nje enze ezinye izimpumelelo ezinkulu emkhakheni wezokuxhumana ngokubona.
Abaphenyi u-Roland Ryf nethimba le-SDM baqede ukuhlolwa kwensimu yokuqala besebenzisa ubuchwepheshe besikhala se-multiplexing (SDM) kubuchwepheshe obungu-4-core obuhlanganiswe nomgogodla ohlanganisa amakhilomitha angama-2 000. Ukuhlolwa kufakazela ukuthi i-fiber yomgogodla wokuhlanganisa iyenzeka ngobuchwepheshe futhi inokusebenza okuphezulu kokudlulisa, ngenkathi kugcinwa imboni ejwayelekile yobubanzi be-125um.
Ithimba labacwaningi eliholwa nguRene-Jean Essiambre, Roland Ryf noMurali Kodialam lethule isethi entsha yamafomethi we-modulation angahlinzeka ngokuthuthuka kokusebenza kokudlulisa okuhambisanayo nokungekho emgqeni ebangeni elingaphansi kolwandle elingama-10,000km. Ifomethi yokudlulisela yenziwa yinethiwekhi ye-neural futhi ingaba ngcono kakhulu kunendlela yendabuko (i-QPSK) esetshenziswa ezinhlelweni zanamuhla zekhebula langaphansi kolwandle.
Umcwaningi uJunho Cho nethimba lakhe bafakazele ngokusebenzisa izivivinyo ukuthi esimweni sokutholakala kwamandla kagesi okulinganiselwe, ngokusebenzisa inethiwekhi ye-neural ukwenza ngcono isihlungi sokwenza inzuzo ukuze kutholakale ukuzuza kwamandla, amandla wohlelo lwentambo yasolwandle angakhuphuka ngama-23%.
AbakwaNokia Bell Labs bazinikele ekwakhiweni nasekwakheni ikusasa lezinhlelo zokuxhumana ngokubona, okushayela ukuthuthukiswa kwe-physics, izinto zesayensi, izibalo, isoftware, kanye nobuchwepheshe be-optical ukudala amanethiwekhi amasha ajwayele izimo eziguqukayo, nangaphezulu kakhulu kwemingcele yanamuhla.
Isikhathi Iposi: Jun-30-2020
Isengezo sefektri.: 3th Floor, 6th Block, Laser Industrial Park, New and High-tech Zone, Anshan City, Liaoning Province, China